ဂယ်ရီ Vaynerchuk ပုဂ္ဂလိကနယူးယော့ဂျက်လေယာဉ်
ဂယ်ရီ Vaynerchuk သေးတဲ့ပုဂ္ဂလိကဂျက်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြဘူး. ဤတွင်ကျွန်မနယူးယော့ဂျက်လေယာဉ်ကိုဝယ်စေချင်အဘယ်ကြောင့်သူစီစဉ်ထားဘာလဲ
My First လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဂျက်လေယာဉ်ပိုင်ရှင်
Grant က Cardone ရဲ့ 10x လေကြောင်းလိုင်း Gulfstream လေယာဉ်တင်ဂျက်လေကောင်းလေလေယာဉ်အတွင်းပိုင်း
မှစ. သို့မဟုတ်အိမ်တွင်းအမေရိကတိုက်စေရန်ငါ့ကိုအနီးပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု Service ကိုရှာပါ
Alabama အဘိဓါန် Indiana ပြည်နယ် Nebraska တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနား
alaska အိုင်အိုဝါ နီဗားဒါး တောင်ဒါကိုတာ
အရီဇိုးနားပြည်နယ် Kansas ပြည်နယ် New Hampshire Tennessee ပြည်နယ်
Arkansas ပြည်နယ် ကင်တပ်ကီ ဂျာစီအသစ် တက္ကဆက်ပြည်နယ်
ကယ်လီဖိုးနီးယား Louisiana နယူးမက္ကစီကို utah
ကော်လိုရာဒို မိန်း နယူးယောက် ဗားမောင့်
Connecticut မေရီလန်း မြောက်ကာရိုလိုင်းနား ဗာဂျီးနီးယား
ဝဲ မက်ဆာချူးဆက် မြောက်ဒါကိုတာ ဝါရှင်တန်
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် မီချီဂန် အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် အနောက်ဗာဂျီးနီးယား
ဂျော်ဂျီယာ မင်နီဆိုတာ ဥက္ကလာဟိုးမား Wisconsin ပြည်နယ်
ဟာဝိုင်ယီ မစ္စစ္စပီ အော်ရီဂွန် Wyoming
အိုင်ဒါဟို မစ်ဆူရီ Pennsylvania ပြည်နယ်
အီလီနွိုက် montana Rhode Island
သငျသညျငါ့ကိုအနီးမဆိုလေဆိပ်မှာဒါမှမဟုတ်ထွက်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ကိုးကား destination သည်များအတွက်ငှားရမ်းနိုင်ပါတယ် Air လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်မော်ဒယ်ထုတ်လုပ်၏ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်လေကြောင်းလေကြောင်းအမျိုးအစားများစာရင်း
Bombardier Gulfstream Dassault စွန်ငှက် ဘိုးအင်း
Cessna ကိုးကား Embraer Airbus Beechcraft
https မှာ://www.wysLuxury.com ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုဝန်ဆောင်မှုနှင့်သင်ဖြစ်စေသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အနီးဇိမ်ခံလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ, အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးမိနစ်ဗလာခြေထောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခရီးသွား, ငါတို့သည်သင်တို့ https ကိုမှသွားလာရင်းဖြင့်သင့်ကိုနောက် destination သို့ get ကူညီပေးနိုင်ပါသည်://သငျသညျအနီးကိုးကားလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက် www.wysluxury.com/location.
Private Jet Charter Flight Service To or From Peoria, ကုမ္ပဏီ